नेपालमा दैनिक तीन बलात्कार, किन बढ्दैछन् बलात्कारका घटना? | Alagdhar
घरBanner Newsनेपालमा दैनिक तीन बलात्कार, किन बढ्दैछन् बलात्कारका घटना?
नेपालमा दैनिक तीन बलात्कार, किन बढ्दैछन् बलात्कारका घटना?
काठमाडौं : कञ्चनपुरकी १३ बर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले देशैभर आन्दोलनको अवस्था सिर्जना भएको छ भने राज्यलार्इ ठूलो चूनौती बनेको छ कञ्चनपुर घटना। घटना भएको दुर्इ महिना पुग्दा पनि हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै प्रहरी प्रशासनको आलोचना भइरहेको छ भने कतिपयले घटनालार्इ ढाकछोप गर्न सत्तारुढ दल नै सक्रिय रहेको आरोप लगाएका छन् ।
जे होस् कञ्चनपुर घटनाले देशमा डरलाग्दो रुपमा बढिरहेका बलात्कारका घटना न्यूनिकरण गर्न राज्यलार्इ ठूलो दवाव सिर्जना गरेको छ । पछिल्ला केही महिना यता देशमा दिनहुँ जसो बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा बलात्कारका समाचार नआएका दिन नै छैन । एकातिर समाज शिक्षित बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधहरु पनि बढ्दै गएका छन् । बलात्कारसंगै पीडितको हत्याका घटना पनि उत्तिकै बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।
प्रहरीको तथ्यांक अनुसार प्रत्येक दिन नेपालमा तीनवटा भन्दा बढी बलात्कारको घटना हुने गरेको छन् । यी मध्ये दैनिक औसतमा तीनवटा घटना दर्ता हुने गरेको छ भने अन्य घटना समान्य मिलापत्र गरी किनारा लगाइने प्रहरीको भनार्इ छ ।
आर्थिक वर्ष ०६९/०७० देखि ०७४/०७५ सम्म बलात्कारका घटना बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ वर्ष अर्थात् दुई हजार एक सय ९० दिनमा छ हजार दुई सय ६३ बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन् ।
प्रहरीमा दर्ता घटनामा ६२ प्रतिशत बलात्कारका घटनामा परिचित व्यक्तिकै संलग्नता पाइएको प्रहरीको तथ्यांकमा छ । प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीका अनुसार बलात्कारको ६२ प्रतिशत घटना परिचितबाटै भएको छ । परिचित व्यक्तिबाट भएको बलात्कारमा पीडितको हत्या हुने सम्भावना बढी रहने उनको भनाई छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा मुलुकभर एक हजार चार सय ८० वटा बलात्कारका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढी हो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा मुलुकभर छ सय ७७ वटा बलात्कारका घटना भएका थिए । यीमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा एक सय २९ वटा बलात्कारका घटना हुँदा सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा ४० वटा बलात्कारका घटना घटेको तथ्यांक प्रहरीको रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा नौ सय पाँच वटा बलात्कारका घटना भए । यो आर्थिक वर्षमा ०६९÷०७० मा भन्दा दुई सय २८ बढी बलात्कारका घटना घटे । ०७०/०७१ मा पनि पूर्वमा दुई सय ५८ वटा बलात्कारका घटना भए । त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकामा दुई सय बलात्कारका घटनामा प्रहरीमा उजुरी परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा नौ सय ८१ वटा बलात्कारका उजुरी परेका छन् । यो वर्ष पनि पूर्वमा तीन सय दुई वटा, काठमाडौं उपत्यकामा एक सय ९१ र पश्चिमाञ्चलमा एक सय ७६ उजुरी परेका छन् । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ६० वटा बलात्कारका घटना भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा एक हजार ८९ वटा बलात्कारका घटना घटे । यो वर्ष पनि सबैभन्दा बढी पूर्वमै दुई सय ९५ वटा बलात्कारका घटना भए । यो वर्ष ०७१/०७२ भन्दा एक सय आठ वटा घटना बढी भए । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा यो संख्या बढेर एक हजार एक सय ३१ पुग्यो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बलात्कृत हुनेमा १५–१६ वर्षका किशोरी बढी छन् । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को तथ्यांकअनुसार १० वर्षमुनिका दुई सय १३ जना बालिका बलात्कारको शिकार भएका थिए । यस्तै १५ देखि १६ वर्षमुनीका तीन सय ५० बालिका बलात्कृत हुँदा १९ देखि २५ वर्षमुनिका एक सय १८ जना, २६ देखि ३५ वर्षमुनिका एक सय ३१ र ३६ देखि ४५ वर्षमुनिका ६९ जना बलात्कृत भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रहरी प्रवक्ता क्षेत्रीले ग्रामीण भेग र गरिब परिवारका किशोरीहरू बढी बलात्कृत हुने गरेको बताउँछन् । समाज र परिवार सचेत नहुँदा बलात्कारका घटना बढिरहेको बताउँदै भने, ‘पछिल्लो समयमा मिडियाले ल्याएको जागरणका कारण पनि बलात्कारका घटनामा सतह र कानुनी दायरामा आइरहेका छन्, पहिले त्यस्तो थिएन । कतिपय घटना गाउँमै मिलाइन्थ्यो । अहिले अदालतसम्म पुग्छ ।’ क्षेत्रीले भने ।
अघिल्लो लेखमासिरियामा चार वर्षयता हजारौंको मृत्यु